Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2011 - Wikipedia
Ny Etazonia dia firenena any Amerika Avaratra izay mizara ho faritra mizakatena (state) dimampolo, distrika federaly iray ary, faritra ivelany (territory) 14. Ny firenena Kanada no manamorona azy ao avaratra, Meksika kosa avy atsy atsimo. Ny ranomasina Atlantika sy Pasifika no sisin-taniny atsinanana sy andrefana. Ny faritra iray izay atao hoe Alaska dia any avaratr'i Kanada no misy azy ary ny andian'nosy Hawaii dia any amin'ny ranomasina Pasifika. 9,7 tapitrisa kilaometatra toradroa ny fivelarantany misy azy, ary faha-efatra eran-tany izy amin'ny fivelaran-tany sy ny isan'ny mponina monina ao aminy. Izy no firenena manana toe-karena matanjaka indrindra eran-tany. (tohiny...)
Indonezia, na repoblikan' Indonesia (amin'ny fiteny indonezianina Republik Indonesia), dia firenena anelanelan-kontinentan' Azia Atsimo Asinanana sy ny Oseania. Ny firenena Indonezianina dia vita tamba-nosy manana nosy miisa 17 500, io no tamba-nosy ngeza indrindra misy eto an-tany. Ny isam-poniny dia misy 240 tapitrisa mahery, firenena faha efatra be mponina indrindra ny Indonezia ary firenena mozilmana voalohany amin'ny isan'ny mpino. Ny Indonezia dia Repoblika Demokratika sy laika (tsy manana finoam-pirenena), ary Jakarta no renivohiny.
Tamin'ny taonjato voalohan'ny erantsika, ny tamba-nosy indonezianina dia faritany ifandraisan'ny fanjakan'ny Azia Atsimo toy India sy ny fanjakana any Azia Atsinanana toy ny Sina. Ny sefon'ny tanàna eo amorontsiraka Indonezianina dia nisafidy nampiasa ny endrika ara-kolontsaina, ara-pinoana sy ara-politika indianina. Hatry ny taonjato faha valo, nikisaka tany amin'ny fanjakan'i Srivijaya, any atsimon'i Sumatra, ny anivon'ny fifandraisan'ny Azia Atsimo sy Atsinanana. Teo Java indray dia nivoatra ny fambolem-bary (noho ny fisian'ny fanjakana sy fianjadiana Srivijaya tsy lavitry ny eo) namela ny fanjakana hanamboatra tsangam-batom-pinoana. Teo ny ganombohan'ny era klasika indonezianina . (tohiny...)
Raha ny arkeolojian'ny teny no jerena, ny teny hoe « Andriana » dia efa nampiasain'ireo vazimba (anarana iantsoana ireo mponina taty anivontany talohan'ny nanjakan'i Rabiby sy Andriamanelo) efa hatry ny ela. Porofon'izany, maro ireo vazimba no ahitana ny teny hoe « andriana » amin'ny anarany. Manarak'izany, ny teny hoe « andriana » dia saika efa nampiasain'ny foko maro eran'ny Madagasikara ary efa aman-jatotaona tokoa. Midika izany fa tsy foko tokana na vitsy no nivoy ny foto-mpandaminana « andriana » araka ny filazan'ny olona sasany azy.
Ny teny hoe « andriana » dia manana heviny roa: ny voalohany dia hoe « andry », izay manana ny lanjany tokoa teo amin'ny ntaolo, satria ny tranon'izy ireo dia misy andry iray lehibe eo afovoany izay ianteheran'ny trano iray manontolo. Ny andriana ary dia ilazana olona azo ianteheran'ny maro. Heviny faharoa, ny « andriana » dia ilazana koa toerana azo atorizana. Zava-dehibe teo amin'ny ntaolo tokoa fahizay ny fandriampahalemana ka na ny fototeny aza dia « andriana ». Ilazana koa izany fa ny « andriana » dia olona azo ianteherana amin'ny fandriampahalemana. Ary farany, ny teny hoe « andriana » dia saika fahita amin'ny anaran'ny olona rehetra na tompoina, na hova na mpanompo. Izany hoe tsy teny natokana hampiasain'olombitsy ny « andriana » fa azon'ny rehetra hampiasaina tsara. (tohiny...)
Nandritry ny ela, ny Finlandy dia entin'ny Fanjakan'i Soeda mifanila aminy, namorona ny renivohitra voalohany, Turky, ny Finlandy dia mbola voamariky ny ady nampifanohitra azy tamin'i Rosia, tanjaka imperialista nampalasa azy diose rosy mizaka-tena tamin'ny 1809 ; tamin'ny taonjato faha roapolo ny Finlandy vao nahazo fahaleovantena tamin'i Rosia tao aorian'ny ady an-trano tamin'ny 1917. (tohiny...)
Ilay anaran'ilay firenena « India » dia avy any amin'ny fiteny Persana Sindhu, anarana persana amin'ny fiteny Sanskrity, ny renirano Indus. Ny anarana ofisialy ofisialy dia mampiasa ny teny Bharat (mpanjaka hindoa niaina tamin'ny taona taloha). Ny anarany faha telo : Hindustan ("tan'ny hindoa" amin'ny fiteny persana), dia niasa tamin'ny taona ny Empira Môgôly, ilay teny Hindustan dia tsy ofisialy intsony ankehitriny fa ampiasaina matetika rehefa manonona ny India.
Ny India ny firenena be olona indrindra eo aorian'i Sina. Misy teny ofisialy roapolo mahery fantatry ny lalam-panorenan'ny India. Ny tenim-pirenena dia ny fiteny hindi.
Mivelatra 7 arivo kilometatra ny amorontsirak' India. Mizara sisintany amin'i Pakistana izy any andrefana, miaraka amin'i Sina, ny Nepaly, ny Bhutan izy any avaratra. Ny Bangladesa sy ny Myanmara any atsinanana. Eo amin'ny ranomasimbe Indianina, tsy lavitry ny repoblikan'ny Maldiva (any atsimo andrefana), ny Ceylan (any atsimo atsinanana). Mizara sisintany miaraka amin'ny Afganistana koa ny India any Avaratra atsinanany.
Teo amin'ny tan'i India no misy ny haifomba antitra indrindra eo an-tany. Misy finoana teraka teo amin'io kontinenta io, toy ny Bodisma, ny Jainisma, ny Hindoisma sy ny Sikisma.
Mandritry ny taonjato roa, ny India dia zanatany anglisy ; izy ny zanatany ngeza indrindra an'ny Britanika. Nahazo ny fahaleovantenany ny India tamin'ny 1947. Tamin'io fotoana io, misy ny comptoir frantsay sy portogezy teo India, naverina ho an'ny India ireo comptoir ireo teo aorian'ny fahaleovantena. (tohiny...)
Ny "hova" dia teny mahalaza zavatra maro:
Voalohany, anaram-poko matanjaka sy nonina tany anivon'i Madagasikara ny hova (lazaina ankehitriny hoe merina na amboalambo na borizano). Porofon'izany, tamin'ny taonjato faha-18 sy faha-17 dia ANKOVA no anarana niantsoan'ny foko betsileo, sakalava, bezanozano ireo faritry ny foko HOVA fa tsy merina akory. Moa tsy AMPAMOIZANKOVA no anaran'ny sisintanin'ny HOVA sy ny SAKALAVA tamin'ny andron'dRanavalona I?
Faharoa, ny hova dia ilazana ireo " andriana" amin'ny foko betsileo, tanala, bara, sns...
Farany, amin'ny foko merina, ny hova dia ilazana ireo tsy andriana nefa tsy mpanompo.Vohitra koa no ilazana azy amin'ny foko Merina sy Betsileo. Ireo hova tranainy dia taranak'ireo vazimba voalohany nonina taty Imerina. Ifandovana ny maha-hova. Maro tsara tarehy ny hovavavy ka maro aminy no tonga vadin'andriana sy niteraka taminy. Misy koa anefa ireo mpanompo nohafahana ka tonga hova ary "hova vao" no fiantso azy. (tohiny...)
Ny labiera dia ny zava-pisotro misy alkola mety ho antitra indrindra. Zava-pisotro misy alkola be mpisotro indrindra ary mahazo ny laharana fahatelo eo amin’ny zava-pisotro rehetra (aorian’ny rano sy dite) ny labiera. Izy dia novokarina avy amin’ny fanotrihana karazana serealy, orga malita (orga efa mitsiry dia hamaina amin’ny rivotra mafana), nefa misy ihany koa mampiasa varim-bazaha, ary katsaka, sy vary. Ny tsiro mampiavaka ny labiera dia avy amin’ny hobolona, ilay fangaro mampisy tsiro mangidy ary miaro ny labiera mba tsy ho simba. Indraidray ny mpamoakatra manisy ahitra manitra na voankazo amin’ny labiera mba hanome tsiro samihafa. Isany ny soratra voalahany nataon’ny olombelona fahagola tamin’izany ny tsiahy momba ny famokarana sy fiparitahan’ny labiera : ohatra anatin’ny Fehezandalàn’i Hammorabi misy lalàna mifehy ny labiera sy ny fivarotam-dabiera. Ny “Hiran’i Ninkasi” dia vavaka ho an’i andriamanitravavin’ny labiera Mesopotamia ary nampatsiaro ny fangaro sy ny fomba famokarana labiera ireo olona ireo, satria tamin’izany fotoana izany, vitsy ny olona mahay mamaky teny ka niteraka voaka-tsoa ho azy ireo izany vavaka izany. Ankehetriny, ny famokarana labiera dia lasa bizina globaly, izany hoe misy orinasa vitsivitsy isakin’ny firenena midominina eo amin’ny tsena, nefa ankoatra ireny, misy ihany koa orinasa kely amandrivony mamokatra labiera ho an’ny tsena rezionaly sy anatiny. (tohiny...)
Ny soratra dia fomba fametrahana an-tsary ny volan'ny fiteny iray, amin'ny alalan'ny endri-tsoratra soratana na natao sary (eo amina taratasy, ohatra), hahafahana mifanakalo fampahalalana haingana kokoa ary tsy mila feo. Manasaraka ny Fotoana Nialohan'ny Tantara sy ny Tantara ny taona namoronana ny soratra. Ny endri-tsoratra voalohany indrindra fantatra amin'izao tontolo izao diaendri-tsoratra hieroglifila hita tany Abydos (400 km mial al ao Le Caire) eo amina vilany tany hita tanaty fasam-panjaka taloha. tamin'ny taona -3400 ireo soratra ireo no nosoratana. Taona maromaro taty aoriana, mipoita ny soratra miendrika fantsika (cunéiforme) an'ny Fanjakambe Someriana, tamin'ny taona -3300 teo ho eo. (tohiny...)
Ny Soeda dia hatra ny ela mpamoaka vy, varahina ary hazo. Ny fivoarana ara-indostria sy ara-toe-karena dia nanomoka tamin'ny taona 1890, nahafahan'ny soeda nivoatra, ary manana toerana tsara ao amin'ny filaharana eoropeanina momban'ny IDH. Ny Soeda dia manana ranomamy be dia be eo amin'ny tany, fa tsy ampy solitany sy angôvo fosily (énergie fossile) izy toy ny solitany na ny arintany. (tohiny...)
Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Ao antampon'ilay tendrombohitra avo voahodidina hadivory eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby, atao hoe "Ambohitrandriananahary", no namponenin-dRabiby i Rabefaravolamanjaka sy ireo zanany ary ao Rabefaravolamanjaka no miafina. Vadiben'Andrianamboninolona i Rabefaravolamanjaka ka matetika Andrianamboninolona no mipetraka maharitra eo amin'i Rabefaravolamanjaka ka nahavery ny anaran'io tendrombohitra io ho "Ambohitrandriananahary", anarana nalain'Andrianamboninolona tamin' "Ambohitrandriananahary", vohitr'Andriamananitany rainy eo ampita avaratr'Alasora. (tohiny...)
Ny anaram-pirenena « India » dia avy any amin'ny fiteny Persana Sindhu, anarana persana amin'ny fiteny Sanskrity, ny renirano Indus. Ny anarana ofisialy ofisialy dia mampiasa ny teny Bharat (mpanjaka hindoa niaina tamin'ny taona taloha). Ny anarany faha telo : Hindustan ("tan'ny hindoa" amin'ny fiteny persana), dia niasa tamin'ny taona ny Empira Môgôly, ilay teny Hindustan dia tsy ofisialy intsony ankehitriny fa ampiasaina matetika rehefa manonona ny India.
Mandritry ny taonjato roa, ny India dia zanatany anglisy ; izy ny zanatany ngeza indrindra an'ny Britanika. Nahazo ny fahaleovantenany ny India tamin'ny 1947. Tamin'io fotoana io, misy ny comptoir frantsay sy portogezy teo India, naverina ho an'ny India ireo comptoir ireo teo aorian'ny fahaleovantena.
Nihanivoatra be India tamin'ny dimy ambin'ny folo taona farany teo, indrindra tamin'ny fanombohana ny fiovana demografika nisyhatry ny 1991. Tamin'ny 22 Janoary 2007, niverina avy tany amin'ny habakabaka ny kapsily indianina tsy misy olona afaka 12 andro, nametraka marika siantifika sy ara-teknika be ho an' India. Hatry ny taona 2008 anisan'ny hery ara-piharian-karena lehibe eto an-tany ny India akaikin'i Sina, ny Rosia ary ny Brezily, India no hery ara-piharian-karena fahavalo eto an-tany. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2011&oldid=72102"
Voaova farany tamin'ny 24 Desambra 2010 amin'ny 10:45 ity pejy ity.